အိမ်ထောင်ပြုတော့မည့် သမီးများသို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ… – Tameelay
အိမ်ထောင်ပြုတော့မည့် သမီးများသို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ…
လူမှုဘ၀, အချစ်ရေး, အထွေထွေဗဟုသုတ
သမီး……။ သူ့ကို ချစ်လို့ ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘချင်း သဘောတူ ပေးစားလို့ ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး တစ်ယောက်ပါ။ တနည်းပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်အားကိုးရာ အိမ်ဦးနတ်ပေါ့။
သမီး……။ အိမ်ဦးနတ် ဆိုမှတော့ ကိုယ်က သူ့ကို ယုံယုံကြည်ကြည် လေးလေးစားစား မြတ်မြတ်နိုးနိုး စွာနဲ့ ဆက်ဆံပါမှ ကိုယ်လည်း သူ့ရဲ့ ဂရုစိုက် ၊ အလေးပေးမှုကို ခံရတယ်။
သမီး……။ ယောင်္ကျား ကို နိုင်(ထိန်းနိုင်သည်) တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနိုင်စားပါနဲ့ …။ သူ့ကို နိုင်စားရင် သား၊ သမီးတွေကပါ လိုက်ပြီး မလေးမစား ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမ နိုင်စားတာ ခံနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးဟာ ဘယ်တော့မှ မကြီးပွား မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး။
သမီး……။ ယောင်္ကျား မကောင်း လို့ ဆိုပြီး ဘဝ ကိုမငြို ငြင်ပါနဲ့။ ယောင်္ကျားကောင်း ဆိုတာ မိန်းမတွေ နောက်ကွယ်ကနေ မသိမသာ ထိန်းကျောင်းပုံသွင်း ရင်းနဲ့ ဖြစ်လာတာပါ။
သမီး……။ ယောင်္ကျား ဆိုတာ မိသားစုအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ မျက်နှာနဲ့ အပြင်မှာ စီးပွားရှာ နေရတာပါ။ လူရှေ့သူရှေ့ ၊ သူ့ အပေါင်းသင်း ၊မိတ်ဆွေတွေ ရှေ့မှာ သူ့ကို မလေးမစား အရှက်ခွဲ ဆက်ဆံမိတာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့။
သမီး……။ တရုတ်လို ဆိုရိုးစကား ရှိတယ်ကွဲ့ ပက်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေ ပြန်မရနိုင်ဘူး ပေးလိုက်တဲ့သမီး ပြန်မပိုင်ဘူး တဲ့ ဒါကြောင့် သူ့အိမ်၊သူ့ ဆွေမျိုး မိသားစု အသိုင်းဝန်း ကြား ရောက်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့် ဆွေမျိုး မိသားစုလို မေတ္တာထားပြီး ဆက်ဆံပါ။
သမီး……။ သူ့အိမ်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ သူ့မိဘကို ကိုယ့်မိဘလို သဘောထားပြီး ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ၊ ပြုစု စောင့်ရှောက်ပါ။ သူ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကို ကိုယ့် ညီအကို မောင်နှမတွေလို သဘောထားပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပါ။
သမီး……။ သူက အပြင်မှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း အိမ်မှာနေပြီး အိမ်တခုလုံးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စ အဝဝကို လိုလေသေး မရှိအောင် ထိန်းသိမ်း ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန်ကို ကျေပြွန်ပါ။
သမီး……။ အိမ်ထောင်တခုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး သိုလှောင်ကန်မှာ ယောင်္ကျားဆိုတာ ငွေခပ်ဖြည့်တဲ့သူ ဖြစ်ပြီး မိန်းမ ဆိုတာ ငွေခပ်သုံးတဲ့သူ ဖြစ်သတဲ့ … ခပ်ဖြည့်ရတဲ့သူ့ခမျာ မလွယ်ရှာပါဘူးကွယ်။ ချိုးခြံချွေတာစွာနဲ့ နည်းစနစ်တကျ သုံးတတ်ပါစေ ကွယ်။
သမီး……။ သား၊သမီး မကောင်း မိဘခေါင်း တဲ့ သား၊ သမီးတွေကို သွန်သင်ဆုံးမ ရာမှာ သမီးအပေါ်မှာပဲ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ သူ့ခမျာ သားသမီး တွေနဲ့ အတူနေရတဲ့ အချိန်တွေက နည်းရှာသကိုး။
သမီး……။ အခန့်မသင့် လို့ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါ ကွာရှင်းပြတ်စဲ မယ်ဆိုတဲ့ အတွေး ယောင်လို့တောင်မတွေးပါနဲ့…။ ကြားက အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေအတွက် စဉ်းစားပေးပါ။
သမီး……။ မမြင်နိူင်တဲ့ ရှေ့လျှောက်ဘဝမှာ … ယောင်္ကျား ကောင်းစားတဲ့အခါ လိုက်ပြီးစံစားပါ။ ယောင်္ကျား အဆင်မပြေတဲ့အခါ လိုက်ပြီး ဒုက္ခခံပေးပါ။ အေးအတူပူအမျှ သုခ၊ဒုက္ခ တို့ကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိုင်မှသာ အေးချမ်း တည်ငြိမ်တဲ့ မိသားစု ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာ။ ပြောဆိုဆုံးမ နေရင်းဖြင့် အမေဖြစ်သူ မျက်ရည်တွေဝဲလာသည်။ ပြီး… တုန်ရင်သော အသံဖြင့်…
ငါ့ သမီးလေး~~~~ အိမ်ထောင်ရေး ~~~~ အဆင်ပြေ ~~~ ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ~~~ အမေ ဆုတောင်းပေးနိုင် ပါတော့မယ် ….။ သူငယ်ချင်း များအားလုံး …. သာယာကြည်နူးဖွယ် ကောင်းသော အိမ်ထောင်ရေး ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
အိမျထောငျပွုတော့မညျ့ သမီးမြားသို့ ဖတျဖွဈအောငျဖတျပါ…
သမီး……။ သူ့ကို ခဈြလို့ ယူတာပဲဖွဈဖွဈ မိဘခငျြး သဘောတူ ပေးစားလို့ ယူတာပဲဖွဈဖွဈ သူဟာ ကိုယျ့ရဲ့ အိမျထောငျဦးစီး တဈယောကျပါ။ တနညျးပွောရရငျ ကိုယျ့ရဲ့ ယုံကွညျအားကိုးရာ အိမျဦးနတျပေါ့။
သမီး……။ အိမျဦးနတျ ဆိုမှတော့ ကိုယျက သူ့ကို ယုံယုံကွညျကွညျ လေးလေးစားစား မွတျမွတျနိုးနိုး စှာနဲ့ ဆကျဆံပါမှ ကိုယျလညျး သူ့ရဲ့ ဂရုစိုကျ ၊ အလေးပေးမှုကို ခံရတယျ။
သမီး……။ ယောကငြ်ျား ကို နိုငျ(ထိနျးနိုငျသညျ) တာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မနိုငျစားပါနဲ့ …။ သူ့ကို နိုငျစားရငျ သား၊ သမီးတှကေပါ လိုကျပွီး မလေးမစား ဆကျဆံပါလိမျ့မယျ။ မိနျးမ နိုငျစားတာ ခံနရေတဲ့ အိမျထောငျဦးစီးဟာ ဘယျတော့မှ မကွီးပှား မတိုးတကျနိုငျပါဘူး။
သမီး……။ ယောကငြ်ျား မကောငျး လို့ ဆိုပွီး ဘဝ ကိုမငွို ငွငျပါနဲ့။ ယောကငြ်ျားကောငျး ဆိုတာ မိနျးမတှေ နောကျကှယျကနေ မသိမသာ ထိနျးကြောငျးပုံသှငျး ရငျးနဲ့ ဖွဈလာတာပါ။
သမီး……။ ယောကငြ်ျား ဆိုတာ မိသားစုအတှကျ ဂုဏျသိက်ခာ၊ မကျြနှာနဲ့ အပွငျမှာ စီးပှားရှာ နရေတာပါ။ လူရှသေူ့ရှေ့ ၊ သူ့ အပေါငျးသငျး ၊မိတျဆှတှေေ ရှမှေ့ာ သူ့ကို မလေးမစား အရှကျခှဲ ဆကျဆံမိတာမြိုး မလုပျမိပါစနေဲ့။
သမီး……။ တရုတျလို ဆိုရိုးစကား ရှိတယျကှဲ့ ပကျထုတျလိုကျတဲ့ရေ ပွနျမရနိုငျဘူး ပေးလိုကျတဲ့သမီး ပွနျမပိုငျဘူး တဲ့ ဒါကွောငျ့ သူ့အိမျ၊သူ့ ဆှမြေိုး မိသားစု အသိုငျးဝနျး ကွား ရောကျသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့ ဆှမြေိုး မိသားစုလို မတ်ေတာထားပွီး ဆကျဆံပါ။
သမီး……။ သူ့အိမျကို ရောကျသှားတဲ့အခါ သူ့မိဘကို ကိုယျ့မိဘလို သဘောထားပွီး ရိုရိုသသေေ လေးလေးစားစား ဆကျဆံပါ၊ ပွုစု စောငျ့ရှောကျပါ။ သူ့ ညီအကို မောငျနှမတှကေို ကိုယျ့ ညီအကို မောငျနှမတှလေို သဘောထားပွီး ခဈြခဈြခငျခငျ ရငျးရငျးနှီးနှီး ဆကျဆံပါ။
သမီး……။ သူက အပွငျမှာ မိသားစု စားဝတျနရေေးအတှကျ ပငျပငျပနျးပနျး ကွိုးစားရုနျးကနျနတေဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျကလညျး အိမျမှာနပွေီး အိမျတခုလုံးရဲ့ ဝယြောဝစ်စ အဝဝကို လိုလသေေး မရှိအောငျ ထိနျးသိမျး ခွငျးဖွငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ တာဝနျကို ကပြွှေနျပါ။
သမီး……။ အိမျထောငျတခုရဲ့ ဘဏ်ဍာရေး သိုလှောငျကနျမှာ ယောကငြ်ျားဆိုတာ ငှခေပျဖွညျ့တဲ့သူ ဖွဈပွီး မိနျးမ ဆိုတာ ငှခေပျသုံးတဲ့သူ ဖွဈသတဲ့ … ခပျဖွညျ့ရတဲ့သူ့ခမြာ မလှယျရှာပါဘူးကှယျ။ ခြိုးခွံခြှတောစှာနဲ့ နညျးစနဈတကြ သုံးတတျပါစေ ကှယျ။
သမီး……။ သား၊သမီး မကောငျး မိဘခေါငျး တဲ့ သား၊ သမီးတှကေို သှနျသငျဆုံးမ ရာမှာ သမီးအပျေါမှာပဲ အမြားကွီး မူတညျပါတယျ။ သူ့ခမြာ သားသမီး တှနေဲ့ အတူနရေတဲ့ အခြိနျတှကေ နညျးရှာသကိုး။
သမီး……။ အခနျ့မသငျ့ လို့ စကားမြား ရနျဖွဈကွတဲ့အခါ ကှာရှငျးပွတျစဲ မယျဆိုတဲ့ အတှေး ယောငျလို့တောငျမတှေးပါနဲ့…။ ကွားက အပွဈမဲ့တဲ့ ကလေးတှအေတှကျ စဉျးစားပေးပါ။
သမီး……။ မမွငျနိူငျတဲ့ ရှလြေှ့ောကျဘဝမှာ … ယောကငြ်ျား ကောငျးစားတဲ့အခါ လိုကျပွီးစံစားပါ။ ယောကငြ်ျား အဆငျမပွတေဲ့အခါ လိုကျပွီး ဒုက်ခခံပေးပါ။ အေးအတူပူအမြှ သုခ၊ဒုက်ခ တို့ကို ရငျဆိုငျ ကြျောလှားနိုငျမှသာ အေးခမျြး တညျငွိမျတဲ့ မိသားစု ကို ပိုငျဆိုငျနိုငျတာ။ ပွောဆိုဆုံးမ နရေငျးဖွငျ့ အမဖွေဈသူ မကျြရညျတှဝေဲလာသညျ။ ပွီး… တုနျရငျသော အသံဖွငျ့…
ငါ့ သမီးလေး~~~~ အိမျထောငျရေး ~~~~ အဆငျပွေ ~~~ ကံကောငျးပါစလေို့ပဲ~~~ အမေ ဆုတောငျးပေးနိုငျ ပါတော့မယျ ….။ သူငယျခငျြး မြားအားလုံး …. သာယာကွညျနူးဖှယျ ကောငျးသော အိမျထောငျရေး ပိုငျဆိုငျကွပါစေ။
ယောက်ျားတိုင်း လိုလို ချင်ချင်နဲ့ မက်မောတဲ့ မိန်းမဆိုတာ
ယောက်ျားတွေလိုချင်တာ ဒီလိုမိန်းမမျိုးပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ပြောတယ်…… (၁) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သိပ်ချောသိပ်လှစရာမလိုဘူး။ လူကြားသူကြားထဲခေါ်ထွက်လို့ရပြီး အိမ်အပြန်ခေါ်ပြန်လာလို့ရရင် ရပြီ။ (၂) ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ကို ငါလိုက်မမေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ငါ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကောင်းကောင်းချစ်ရင် ရပြီ။ (၃) အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အလုပ်တစ်ခုရှာလုပ်နိုင်တယ်။ မလုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာပဲ အိမ်ရှင်မအဖြစ် ပီပီသသနေ။ …
သင် တစ်ယောက်တည်း ရှိနေချိန် နှလုံးအဆုတ် အသက်ကယ်နည်း
သင် တစ်ယောက်တည်း ရှိနေချိန် နှလုံးအဆုတ် အသက်ကယ်နည်း CPR ညနေ ၆း၁၅ လောက်မှာ သင်ဟာ အိမ်ကို တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာ နေတယ် ဆိုကြပါစို့။ အလုပ်မှာ ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှား ပင်ပန်း ခဲ့တဲ့ နေ့ဆိုပါတော့။ သင်ဟာ တကယ် မောပန်း စိတ်ပျက် …